Mai Chibwe VekwaZimuto: Kubudisa mweya uchirhojewa (kusura kwechitubu).
Queefing rather than Farting
Pane mamwe maitire okuti unongohwa mweya wabuda murume ari mukati. Iwe muridzi unenge uchiziva papinda mweya asi murume asingazivi. Ipapo kuti utange kutaura nezvazvo woona sokuti zvinotapudza zemo. Kuti unyarare unenge uchiziva kuti murume anokwanisa kunge achifunga zvisirizvo. Vakadzi vakawanda vanobudisa mweya vosvodeswa nazvo vachifunga kuti kutadza kumisa mweya kubuda. Saka ngatimboona kuti zvinoitiswa nei uye mweya unobvepi?
Chitubu chemukadzi kana chisina chinhu mukati mativi acho anobatana zvokuti hamuna mweya mukati nokuti hapana pokuchengetera mweya. Hino toti maitire amuri kuita, sokuti wakapakicha mabvi pamafudzi emurume, murume ari mukati ari kukoira iwe uri kungogamuchira hapana mukana wekumusimudzira kana kufakanyika ari kungoita ega. Ipapo chombo chake chinokwanisa kubata mweya chomusundira mukati, nokuti kumativi uku kune kunyorova, zvino mweya uya unobatiwa wotadza kubuda. Murume ozoramba achingo wedzera mwaya uya kuzvika puresha yemweya uri mukati yawanda. Ndipo unohwa wobuda uchiita noizi zvinovhundusa mese muri vaviri. Vanoziva vanoti mweya unowanda kana murume ane chombo chakakora chinofasa chitubu.
Saka murume ndiye anokonzera mweya muchitubu uye maitire enyu anguva iyoyo. Isu tinokasirisa kuti Sorry kumurume asi kutaura chokwadi murume anofanira kuti sori nokuti ndiye anoitisa izvi nokuda kwekukora chechombo chake.
Ukaona kuti uri kuwanza kubudisa mweya, chinja maitire enyu. Kana zvichitika wakapakachira mabvi pamafudzi zama kungopakachira gumbo rimwe chete, kunaka kwacho kwakangofanana kana kuti wedzera nokuti chombo chononobata pasina kujaira, asi unoona kuti mweya unoita mushoma. Kana uri munhu anofarira maitire awa chigarochinjanisa makumbo ekuturika pamurime kuti chitubu chisajaira kungokoigwa pamwe chete po.
Kunozoti wajaira kuhwa mweya uchibuda unenge usisina basa nazvo kana iyewo murume anenge asina basa nazvo anongoramba achiita zvaari kuita. Mweya wechitubu hauna munhuwi saka hazvina basa kuti wakawanda sei. Ukaona zvanetsa kwira murume womutanyanga moita. hauiti mweya, kozotizve kana uvete nedumbu makumbo ari pamwe chete woti chiuno simudzei murume wopinda, hazviitisi mweya. Imi mega munokasira kuziva maitire anoitisa mweya.
Mhepo muchibereko chaimo haisviki. Chibereko chakavhagwa zvokuti urume chete ndihwo hunokwanisa kupindamo. Pamuromo wechibereko pane PLUG ye MUCUS kureva kuti mhepo haikwanisi kusvikako. Usatya kuti pakuisana unokwanisa kupinda mhepo. Hazvikwanisiki.
chii chinokonzeresa beche kusura nguva yebonde
kubudisa mweya nemberi
kubudisa mweya nemberi kunopedzwa nei
Posted by Mai E Chibwe at 12:50